Uhlobo: Inkqubo yoThengiso eDityanisiweyo yoPapasho lweDijithali | Martech Zone
NgoMgqibelo, Agasti 1, 2015 NgoMvulo, Oktobha 12, 2015 Douglas Karr
Ukupapashwa kweNiche kusaqhubeka nokuqhuba umxholo ojolise kakhulu kumaqela ahlukeneyo. Ngelixa ucofa ucofe-kunqakraza, ubambiswano kunye neenkqubo zesibhengezo sesibhengezo siqhubeka nokulawula intengiso yenkqubo yabo elula yoku-odola kunye neendleko eziphantsi kukhokelo ngalunye, bahlala benqakrazo olusezantsi kunye nenqanaba lokuguqula. Ngenxa yokuba zingabizi, banako ukuvuna umvuzo omangalisayo kunye nembuyekezo eqinileyo kutyalo-mali kubathengisi.
Cinga ngokhangelo lwakho kunye nokuziphatha kophando. Njengoko ndijonga kwidesktop kunye nakwibhokisi yemiyalezo engenayo ye-imeyile, ndizaliswe zii-imeyile kunye neentengiso ezivela kubathengisi abafanelekileyo. Ndibona amakhulu, mhlawumbi amawaka, eemathiriyeli zentengiso veki nganye. Kodwa njengoko ndicinga ngokuhambisa kwam ngeposi kunye nemirhumo yedijithali yoshicilelo, zimbalwa kuphela iimpapasho endizibhalisileyo kwaye ndizinike ixesha phakathi evekini. Ukuziphatha kokukhangela kwiwebhu kumava okubaleka kupapasho lwedijithali kwiphepha okanye kwithebhulethi kwahluke kakhulu.
Kukho amawaka opapasho phaya, uninzi lwalo mhlaba kwi-desktop yomenzi wesigqibo (ngeposi okanye ithebhulethi). Kwimeko kukuba ulifaka njani ushicilelo lwedijithali kumxube wakho wentengiso? Kwaye ubeka njani emgangathweni, uyile kwaye uyipapashe intengiso kolo papasho? Yiloo nto Uhlobo ilungiselelwe.
Uhlobo oluthile luguqula umhlaba wokuprinta kunye nemveliso yentengiso ekwi-Intanethi, ukuvelisa izisombululo zesoftware entle yokuprinta kunye nokuhanjiswa kweentengiso zethebhulethi.
Ukulawulwa okuthe ngqo, iinkqubo kunye nokuhambisa amawaka eefayile zentengiso rhoqo ngenyanga kwisiseko esikhulu sabathengi, kubandakanya abapapashi abakhulu (i-Hearst, i-Condé Nast, i-News UK, i-Guardian, imithombo yeendaba ye-DMG, i-TimeInc UK); iiarhente ezikhokelayo zoyilo (McCann Erickson, VCCP, BBH) kunye neempawu zehlabathi ezinkulu nezincinci. Ujongano lwe-Specle alunakuba lula, khangela nje ngesihloko, fumana upapasho, fumana ii-specs kunye noku-odola intengiso:
Ukucaciswa kutsha nje kwendima ebalulekileyo yokusebenzisana Isisombululo sopapasho lweAdobe yedijithali, Ukuvumela ukuveliswa kokubandakanyeka nokunyanzelisa izibhengezo zedijithali kwii -apps ngaphandle kwesidingo sekhowudi. Inkqubo yentengiso edityanisiweyo iya kuvumela amaqela okuyila kunye noyilo ukuba abeke izibhengezo nakweyiphi na into eyenziweyo kusetyenziswa iAdobe DPS. Isoftware yohlobo oluthile iya kwenza kube lula kunangaphambili kwiiarhente zoyilo kunye nabapapashi ukuhambisa intengiso, intengiso yedijithali entle.
Malunga neSisombululo seAdobe yoshicilelo
I-Adobe DPS sisixhobo esisekwe kwiwebhu esivumela abasebenzisi ukuba benze ii-digital editions zokupapashwa kwabo. Uyilo kunye namaqela okuyila angenza ngokulula iiapps ezintle ngaphandle kokubhala ikhowudi. Sebenzisa i-DPS, imibutho inokuqhuba ukubandakanyeka kumava osetyenziso lweselfowuni, isebenzise amandla okupapasha aguqukayo ukuqhubeka nokunxibelelana nabasebenzisi, kunye nokuhambisa ifuthe elingqinisisekayo leshishini kusetyenziswa ii -apps-zonke zineqonga lokushishina elivela kwiAdobe.
Iqwalaselwe kwakhona ukusuka emhlabeni phezulu, I-Adobe DPS iya kubonelela abasebenzisi ukuba bhetyebhetye ngakumbi kunye namathuba angcono okubandakanya abaphulaphuli babo. Ukuba unokwenza intengiso yokuprinta, ngoku unokwenza nentengiso yedijithali. I-Specle ngoku idityaniswe nenkqubo yesicelo se-Adobe (API) yokuguqula amathuba entengiso yedijithali-ngakumbi kwii -apps- kunye nokwenza amathuba anamandla okuthengisa.
tags: Isisombululo sopapasho lweAdobe yedijithalidps zedobeBBHI-Condé Nastiphephancwadi ledijithaliUkupapashwa kwedijithaliImithombo yeendaba yeDMGGuardianHearstintengiso yemagaziniintengiso yamaphephancwadiUMcCann EricksonIindaba zase-UKisizibaIxesha le-UKVCCP